प्रेमीसँग मिलेर श्रीमतीले गरिन् यसरी आफ्नै श्रीमानको ह’त्या (पढ्नुहोस् सम्पूर्ण नालीबेली)
May 20, 2020 1754
विराटनगरका औषधी व्यव,सायी देवीप्रसाद दुलालको ह,त्यामा तीन जना संलग्न भएको पाइएको छ । ह त्याको मुख्य योजनाकार श्रीमती मिना श्रेष्ठ दुलाल रहेको र ह त्यामा गर्ने विराटनगरकै ब्रह्मदेव साह र इटहरी १२ खनारका सोनु साह छन् ।
थप अनुसन्धान,को क्रममा सोनु सोमबार ३ बजे खनारबाट पक्रा,उ परेका हुन् । सोनु र ब्रह्मदेव साथी हुन् । ह त्याको पूर्व योजनासहित मीनाले बोलाएपछि शनिबार राति ब्रम्हदेव र सोनु डोरी र ह त्याका लागि प्रयोग हुने सर्जि’कल ग्लोब्स लिएर आएका थिए । ह त्याका क्रममा फिङ्गर प्रिन्ट देखिने डर,ले उनीहरूले ग्लोब्स लगा’एका थिए ।
पक्रा’उ परेका तीनजनालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरेको छ । मोरङका प्रहरी उपरीक्षक विश्व अधिकारीका अनुसार प्रार,म्भिक अनुसन्धान’का क्रममा श्रीमती,को योजनामा ह त्या भएको बताए ।
यसरी बनेको थियो ह:त्या योजना
शनिबार राति दुलालको घरमा औषधि व्यवसायी हरिमोहन श्रेष्ठ र धनबहादुर काफ्ले पुगेका थिए । साथी पुगेपछि दुलाल’ले खानापानको व्यवस्थापन गरे । दुईजना राति करिब नौ बजे दुला’लको डेराबाट निस्किएका थिए ।
म’दिरा से’वन गरेका दुलाल कोठामा सुत्न गए । मीना र दुलाल एउटै कोठाको छुट्टा छुट्टै खाट,मा सुत्छन् । श्रीमान सु’त्न गएपछि ब्रम्हदेवलाई बोलाउँछिन् । न्यूरो अस्पतालको फेसबुक फार्मेसी अगाडि मोटर’साइकल राखेर पैदल दुलाल,को डेरा पुगेका ब्रम्हदेव र सोनुलाई सिँढीमा लुक्न लगाउँछिन् ।
आधा घण्टापछि मीनाले इसारा गर्दै ढोका खोल्छिन् । भित्र कोठामा दुलाल सुतिरहेका थिए । मदि’राको न,सामा सुतेका दुलालको घाँ’टीमा ब्रम्हदेवले डो’रीले कस्छन् ।
सोनुले उनको खुट्टा समात्छन् । यो बीचमा दुलालले प्रती,गर्न खाजेका छन् । प्रती,गर्दा उनको निधार झ्यालमा ठोक्किएर चो’ट लागेको थियो भने घाँटीमा कस्सिए’को डोरी चुँडिए’को थियो ।
दुईजनाले ह त्या गरिरहँदा श्रीमती मीनाले पनि सघाइन् । सास चल्न बन्द भए पनि उनीहरूले ब्रम्हदेव र सोनुले छाड्दैनन् । पेट र शरीरका अन्य भागमा लात्ती’ले हान्छ’न् ।
ह त्याका क्रममा सं,घर्ष चल्दा दुलालको घाँ’टीमा गहिरो डा,म बसेको थियो । डा,म देखिएपछि छोप्न भन्दै मीनाले एक बट्टा पोन्ड्स पाउ’डर लगाइदिइन् । ११ बजेदेखि करिब आधा घण्टाको प्रयासमा दुलालको ज्या’न गयो । तर ह त्यापछि तीनजना दुई बजेसम्मसँगै बसे ।
२ बजेपछि सोनु र ब्रम्हदेव निस्किएपछि मीनाले छिमेकी र देवीप्रसादका साथीलाई फोन गरी श्रीमान अ,चेत छन् भन्दै बोलाइन् । एम्बुलेन्समा हालेर गोल्डेन अस्पताल ल्याएका थिए । अस्पतालले मृ’त घोषणा गरे,पछि मीना रु,न थालेकी थिइन् ।
प्रहरीका अनुसार चार वर्षअघिदेखि पाँच महिना अघिसम्म ब्रम्हदेव दुलाल’को माँ देवी पाथिभरा फर्मामा काम गरे । यो बीचमा दुलालकी श्रीमतीसँग ब्रम्हदेवको हि’मचिम बढेको थियो ।
श्रीमतीसँगको सम्बन्ध थाहा पाएका कारण श्रीमान्–श्रीमतीमा बेमेल थियो । आफ्नो श्रीमानले गरेको व्यवहार मीनाले ब्रम्हदेवलाई सुनाउँ’थिइन् । उनले श्रीमानलाई सब’क सिकाउने योजना रहेको बताउँथिइन् । ब्रम्हदेवले गत माघमा विवाह गरेको थिए । तर मीनासँगको संवाद निरन्तर चलिरहेको थियो ।
शनिबार राति एउटा बेडमा श्रीमती मीना र ८ वर्षीय छोरा सुतेका थिए । दुलाल छुट्टै बेडमा सुते’का थिए । दुलालको घर सुनसरी खनार हो । तर करिब ६ वर्षयता उनी विराटन’गरमा बसेर माँ देवी पाथिभरा फर्मा सञ्चा’लन गरिरहेका थिए ।
मीना श्रेष्ठसँग उनले १० वर्ष,अघि प्रेम विवाह गरेका थिए । उनका ८ वर्षीय छोरा छन् । उनीहरू वैदेशिक रोजगा’रीका लागि डेनमार्क पनि पुगेका थिए । – अप’राध न्यूँजबाट
Prevदुःखद खबर: नेपालमा कोरोनाले थप १ जनाको मृ’त्यु..
Nextनेपालको पक्षमा बोलेको भन्दै मनिषा कोइरालामाथि यसरी खनिए भारतीय मिडिया, हेर्नुहोस्
धरानका मेयर जब झाडु लिएर सडक सफा गर्न उत्रिए… (भिडियो सहित)
२५ करोड किन ? सियोनाका बाबाले गरे खुलासा (भिडियो सहित)
बिहानै खाली पेटमा चिया पिउनुहुन्छ ? एकपटक अवस्य पढ्नुहोस, तपाँईलाई यस्तो हुनपनि सक्छ
भोलि जेठ ४ गते आईतबारको राशिफल हेर्नुहोस्
यी युवतीको भिडियो बन्यो भाइरल, कमेन्टमा युवाले भने १६/१७ वर्षमा यस्तै हुन्छ नानी (भिडियो सहित) (134570)
रोपाइँमा खिचिए यस्ता दृश्य, जुन बने टिकटकमा भाईरल (हे`र्नुस् भिडियो) (115361)